Luis Suarez Oo Walwal Cusub Ku Bilaabay Jamaahiirta Kooxdiisii Hore Ee Liverpool Isaga Oo Ka Hadlay Heshiiskii Fashilmay Ee Uu Philippe Coutinho Ugu Biirayay Camp Nou. – WWW.Gool24.net
Luis Suarez Oo Walwal Cusub Ku Bilaabay Jamaahiirta Kooxdiisii Hore Ee Liverpool Isaga Oo Ka Hadlay Heshiiskii Fashilmay Ee Uu Philippe Coutinho Ugu Biirayay Camp Nou.
Waxaanu hore idiinku soo gudbinay qayb ka mid ahayd waraysi dheer oo uu Luis Suarez bixiyay, waxaanu halkan idiinku haynaa qayb kale oo uu si wayn ugaga hadlay xaalada xidigii ay Anfield ka soo wada ciyaareen ee Philippe Coutinho kaas oo heshiis fashilmay ugu wareegi lahaa Camp Nou intii lagu jiray suuqii xagaagii la soo dhaafay. Suarez ayaa si hagar la’aan ah u amaanay xidiga ree Brazil wuxuuna dareenka maamulka Camp Nou uu ku soo jeediyay waxa uu Coutinho kooxdooda ku soo kordhin karo.
Laakiin dhinaca kale Luis Suarez ayaa walwal cusub ku abuuray jamaahiirta kooxdiisii hore ee Liverpool kadib markii uu sheegay in Coutinho uu yahay xidig hami wayn xambaarsan kaas oo doonaya in uu ku soo biiro Barcelona. Kooxda Liverpool ayaa iska diiday dalab kasta oo suuqii xagaaga ay Barcelona ku doonaysay Coutinho balse wali waxay Balaugrana doonaysaa in ay Coutinho ku soo lamaanaysiiso Suarez.
Luis Suarez ayaa sheegay in Philippe Coutinho uu soo maray xaalad aad u adag balse waxa uu markale ku amaanay sida xirfadlenimada ah ee uu Coutinho uga soo baxay xaaladii xumayd isla makraana uu u caawinayo kooxdiisii hore ee Liverpool.
Ugu horayn Suarez oo ka hadlaya xaaladii xumayd ee uu Philippe Coutinho soo maray markii uu fashilmay heshiiskii uu Barcelona ugu biiri lahaa ayaa yodhi: “Waxa uu ka soo baxay xaalad adag iyo waqti aad u adag, laakiin ka xirfadle ahaan waxa uu isagu sii waday in uu muujiyo sida uu ciyaartoy fiican u yahay iyo tayada shaqsi ee uu leeyahay”.
Suarez oo ka hadlaya isku daygii fashilmey ee Coutinho ayaa yidhi: “Inkasta oo uu isku dayay in uu Liverpool ka baxo, waxa uu sii wadaa in uu kooxda caawiyo iyo shaynteeda. Waxa uu muujinayaa in uu yahay xirfadle wanaagsan kaas oo leh hamiga uu ku doonayo in uu ku qaado talaabo ka saraysa. Isagu waa ciyaartoy kaas oo maaanta ku ciyaaraya heerka ugu sareeya”.
Suarez ayaa wax laga waydiiyay in saaxiibkiisa Coutinho uu ku fashilmay in Liverpool uu ku qasbo in Barcelona laga iibiyo wuxuuna yidhi: “Xaqiiqdii waa in uu sameeyo sababtoo ah isagu waa ciyaartoy hami leh isla markaana ciyaartoy kastaaba waxa uu doonayaa in uu u yimaado Barcelona”.
Markii Suarez la waydiiyay waxa uu Coutinho ku soo kordhin karo Barcelona ayuu ku jawaabay: “Wax badan. Anigu waxaan isaga u aqaan shaqsi ahaan iyo ka ciyaartoy ahaan sababtoo ah waan la soo ciyaaray, laakiin qof kastaaba wuu ogyahay waxa uu Coutinho awooda u leeyahay in uu soo kordhiyo”.
Liverpool ayaa bisha January go’aan ka gaadhi doonta haddii ay aqbali doonto dalab kale oo kaga yimaada dhinaca Barcelona balse markan waxaa jira kooxo kale oo Barcelona si xoogan ugula tartamaya saxiixa Coutinho waxaana ugu horaysa PSG oo doonaysa in ay markale maamulka Camp Nou ka cadhaysiiso.